Ngaba uBinance ukhuselekile? Ukulawulwa kwe-30% ye-Spot Cryptocurrency Volume ngo-Matshi 2022 - Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Ngaba uBinance ukhuselekile? Ilawule i-30% yomthamo wendawo ye-cryptocurrencies ngoMatshi ka-2022
Ingxelo yenyanga yamva nje ye-CryptoCompare ibonisa uBinance ukuba ubambe phantse isithathu semali iyonke ethengiswe kumaqonga e-cryptocurrency ngoMatshi 2022. Akukho bhanana.
Ngokutsho kwengxelo yakutshanje evela kwi-CryptoCompare, umhlalutyi wemarike ye-crypto, imarike yendawo yonke ikhule nge-10,5% ngo-Matshi, kunye nemiqulu yokurhweba ifikelela kwi-1,6 yeebhiliyoni zeedola ... TRILLION. HAYI IBHANA. I-69,9% yomthamo opheleleyo yaqokelelwa yi-15 ye-crypto exchanges enkulu kwihlabathi, kuquka i-Binance, i-Coinbase, i-Bitfinex, i-OKX, i-Huobi, i-FTX kunye ne-Kraken.
I-Binance ilawula imarike ye-cryptocurrency
I-Binance, kwinyanga ka-Matshi ka-2022, yenza i-30,2% yomthamo wentengiselwano yemarike yendawo, yenza malunga ne-490 yeebhiliyoni zeedola. Oko kukunyuka nge-15% kwimiqulu kaFebruwari.
Ngelixa eli nani lingaphantsi kancinci kwisabelo semarike yerekhodi ye-33,7% ngoNovemba ka-2021, yimpumelelo enkulu kuBinance.
I-Binance ilandelwa nguCoinbase kunye ne-OKX kunye nezabelo zemakethe ze-5% kunye ne-4,7% ngokulandelanayo. I-Coinbase icutshungulwe i-81,9 yeebhiliyoni zeedola kwizivumelwano zendawo, phantsi kwe-12% ngenyanga, kwaye i-OKX iqhutywe kwi-75,9 yeebhiliyoni zeedola, phantsi kwe-26%.
Uphononongo lokuTshintshiselana ngoMatshi 2022 lwesiza seCryptoCompare
Inkosi ye-crypto derivatives
Umsebenzi kwimarike yezinto eziphuma kwizinto eziphumayo uye wanda emva kweenyanga ezintandathu ezilandelelanayo zokuhla, kunye nemiqulu yonyuka kakhulu ngoMatshi. Kwakhona ngokutsho CryptoCompare ingxelo, derivatives ukurhweba umthamo unyuke 4,58% ukuya $ 2,74 yezigidi zezigidi zezigidi zezigidi, ebalwa 62,8% iyonke umthamo worhwebo centralized, ngelixa umthamo yorhwebo indawo eseleyo 37,2%.
CoinCompare waphawula ukuba imarike derivatives inemithamo yorhwebo ephezulu ngaphezu kwebala, njengoko abatyali-mali balumke malunga nemingcipheko ehambelana norhwebo lwamabala. "Abathathi-nxaxheba beMakethi bahlala belumkile kwaye baqhubeke befumana ukuvezwa kwee-cryptocurrencies ngokusebenzisa i-derivatives. Ukugubungela indawo kunye nemarike ekhethekileyo ".
I-Crypto derivatives yizivumelwano zesibini ezilinganisa ixabiso le-asethi yabo ephantsi. Uninzi lwabatyali-mali lukhetha ukungena kwiikontraki eziphuma kwi-derivative njengoko libavumela ukuba batshintshe ukuvezwa kwabo kwii-cryptocurrencies ezahlukeneyo kwaye zibakhusele ekuguquguqukeni kwexabiso eligqithisileyo.
Ngokutsho kwengxelo, iBinance yaba yeyona nto inkulu yotshintshiselwano ngoMatshi ka-2022, ekhokelela kwimarike malunga ne-52% yezinto ezithengiswayo. Utshintshiselwano luqhube ngaphezu kwe-1,4 yeebhiliyoni zeedola kwiintengiselwano eziphuma kwi-derivatives ngo-Matshi, ukunyuka kwe-8,3% ukusuka kumthamo kaFebruwari.
Ilandela i-OKX kunye nomthamo we-446 yeebhiliyoni zeedola (+ 12,5%), i-Bybit kunye ne-$ 380 (ephantsi kwe-8,8%) kunye ne-FTX kunye ne-$ 295 yezigidigidi (+ 2,07%).
Ngaba uBinance ukhuselekile?
I-Binance iphinda ibonise kunye nomthamo wokuthengiselana olawulayo ukuba utshintshiselwano oluqinileyo noluthembekileyo, olusetyenziswa ngabaninzi be-cryptoinvestors.
Ihlabathi le-cryptocurrencies liyoyikisa, ngokufanelekileyo, bonke abo bacinga ukutshala imali, kwaye bangathanda ukwenza oko ngeyona ndlela ikhuselekileyo. Ukunikezela ngemali yakho kutshintshiselwano kufana nokutyala imali ebhankini: uphulaphule oko iziko linikezelayo kwaye uthathe isigqibo sokuthembela kwizakhono zabo ukuze utyalo-mali lungalahleki. Ngethemba, amandla abo anjalo ukuba abayi kuphumelela, ukuba abayi kukonakalisa, ukuba baya kuqhubeka nokuvela kunye nokuphucula.
Ndibhale inqaku elide ukuchaza ukuba ngubani uBinance: Isikhokelo esipheleleyo sokuqonda indlela yokusebenzisa iBinance. Kukho iingongoma ezixhasayo kwaye zikhomba ngokuchaseneyo .. kodwa igunya labo, ukukhula rhoqo kwabasebenzisi bayo kunye nombulelo kolu budlelwane umthamo omkhulu wentengiselwano kokubini kwizinto eziphumayo kunye nemarike yendawo ibonisa ukuqina kwayo. Umseki wayo uChangpeng Zhao, masingalibali, ukhe wavela nakwiqweqwe lemagazini iForbes.
Ubhalisela iBinance simahla, kwaye ungayenza kule khonkco ukufumana i-20% isaphulelo kwiikhomishini, ngonaphakade. Okanye ucofe iqhosha elingezantsi.
BHALISA I-BINANCE NGE-20%.
Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nokuba zeziphi izaphulelo zekhomishini, ungayenza ngokufunda eli nqaku isaphulelo kwimirhumo yeBinance, okanye ngokuhlolisisa ukuba yeyiphi ithokheni ye-BNB ye-Binance, eyona ndlela iphambili yokuhlawula iikhomishini kwi-Binance, ngokufunda eli nqaku elinikezelweyo. I-Binance Coin (BNB).
Inqaku langaphambiliIimetrics ekufuneka ziqwalaselwe ukuthenga nokuthengisa ii-NFTs